Esi salathisi sinika ulwazi ngamava kunye neziqinisekiso zootitshala esikolweni. Ootitshala bathathelwa ingqalelo &quot;njengamava&quot; ukuba bebefundisile ngaphezulu kweminyaka emibini. Ootitshala bathathelwa ingqalelo &quot;njengabasesikolweni&quot; ukuba bayazifezekisa zonke iimfuno ezifanelekileyo zokufumana isatifikethi kwinkalo yesifundo kunye nenqanaba lebakala abafundisa kulo. (Umthombo wedatha: unyaka wesikolo ka-2018-2019)
Bangaphi ootitshala abasisigxina kwesi sikolo?
Banamava kangakanani ootitshala kwesi sikolo?
Ootitshala bathathelwa ingqalelo “njengamava” ukuba bebefundisa ngaphezu kweminyaka emibini.
Iminyaka emi-6 ukuya kweli-10
Iminyaka eli-11 ukuya kweli-15
Iminyaka eli-16 ukuya kwengama-20
Abalawuli bengingqi bakwenze njani umgangatho wokusebenza kootitshala kwesi sikolo?